Nezvedu - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Hutano Ndiwo Chishuvo Chedu
Utano hwakaenzana ne 1. Nehutano chete vanhu vanogona kushanda nesimba, kugadzira hupfumi, uye kunakidzwa nehupenyu. Aya ndiwo mazero ari kuseri kweimwe. Mazuva ano, zvisinei kuti uri mune indasitiri ipi, muviri wako ndiro guta guru reshanduko, uye muviri une hutano chete unogona kukuita kuti uzvipire kubasa rako nemhuri. Muchokwadi, kunyangwe munhu ane tarenda rakadii, kana asina muviri une hutano hwekurwira, anozopedzisira atadza kuziva zvaanoda. Mushure mezvose, chinhu chinonyanya kutyiwa muhupenyu hachisi kukundikana, asi kushaya simba. Basa uye hupenyu hwehupenyu hwevanhu vemazuva ano huri kuwedzera, uye muviri uri mumamiriro ehutano kwenguva refu. Panguva imwecheteyo, nekuvandudzwa kwemararamiro evanhu, kwehupenyu huri nani, vanhu vari kubhadhara zvakanyanya kuhutano hwavo, uye kudiwa kwezvigadzirwa zvehutano zviri kuwedzerawo.
Zvigadzirwa zveHMKN zvinogona kubatsira vanhu kubata zviri nani matambudziko ehutano. Semuenzaniso, kana ukapfeka masiki ekurapa anoraswa, unogona kusefa mabhakitiriya nemavhairasi uye kudzivirira zvirwere zvinotapukira zvakaita seCOVID-19; kana iwe ukashandisa yedu UV disinfection tsvimbo inogona kubvisa mabhakitiriya uye mavhairasi pazvinhu; kushandisa okisijeni yedu concentrator haigone chete kudzoreredza kuneta, kuzorodza muviri nepfungwa, kugadzirisa okisijeni yehuropi, uye kugadzirisa mashandiro eiyo cranial nerve system kune imwe nhanho, asi zvakare kuvandudza yakaderera Zviratidzo zveoxygemia, bvisa bronchospasm. , kubvisa matambudziko ekufema, kuderedza nhamba yezvipatara uye zvirwere zvepashure uye antiemetics.
Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd. ikambani yekuChina ine hanya nezvehutano nekuchengetedzeka kweveruzhinji nevanhu vese. Isu takavambwa muna 2013 uye tinotungamirwa muChengdu, Sichuan. Inonyanya kupa hutano hwakasiyana-siyana uye mishonga yezvokurapa yakadai semishonga yekudzivirira denda, disinfection midziyo, uye zvigadzirwa zvemishonga, nezvimwewo. Zvigadzirwa zvinonyanya kutarisana nezvipatara zvehurumende uye zvepachivande pamatanho ose, ma pharmacy ezvitoro, zvikoro, mabhizimisi makuru uye masangano, nezvimwewo.
Iyo kambani ine nyanzvi dzesainzi dzekutsvagisa masangano uye vashandi vari kuita tsvakiridzo nekusimudzira. Isu tinoshandisa dzinenge dzakaomarara zviyero kugadzira zvigadzirwa zvakakwana, uye takapasa 13485 chitupa, CE certification, uye FDA chitupa chakapihwa nemasangano ane chiremera pasi rose. Gadzira hurongwa hwehutongi hwemhando zvinoenderana neISO9001 uye ISO13485 zviyero, nyatso gadzirisa maitiro ekugadzira, shandisa CP, MSA, 5S uye mamwe manejimendi ekutungamira kusimbisa kutonga kwemhando yechigadzirwa, uye kuve nemarezinesi ekunze uye ekunze, zviteshi zvemagetsi, uye mvumo yakakodzera. maitiro ekupinda-kubuda-yekuongorora uye yekuvharira mabhizinesi ekunyorera. Kuwedzera kune yedu pachedu R&D uye zvigadzirwa zvekugadzira, isu tinonamatirawo kune inopindirana yemhando yekudzora misimboti yezvigadzirwa zvatinomiririra: kunyatso kudzora matanho ese ekutengwa kwezvinhu, kugadzira, chekufambisa, uye mushure mekutengesa; uyezve, vagadziri vanoshandira pamwe nesu vanofanirwa kunge vaine magwaro akakodzera. Isu tichatumira vashandi vedu kufekitori kuti vaongororwe nguva nenguva pamatanho ese echigadzirwa.
Isu takazvipira kupa zvemhando yepamusoro uye zvisingadhure zvekurapa uye zvehutano zvigadzirwa kune veruzhinji kuchengetedza hutano hwepamunhu nekuchengetedzeka. Panguva imwecheteyo, tinogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.